Twitter inowedzera rutsigiro rweiyo nyowani iOS 11.1 emoji | IPhone nhau
Twitter inowedzera rutsigiro rweiyo nyowani iOS 11.1 emoji
Karim Hmeidan | | IPhone maapplication, iOS 11
ari emoji ndiyo nzira nyowani yekutaurirana, Mimwe mifananidzo yakagarwa nhaka kubva kumaASCII macode isu atakagadzira mamwe makore apfuura mune yekare sms tichitenda kune alphanumeric zviratidzo zveedu ekare mafoni. Kuenda kuri kushandisa zviratidzo zvechitaera + - * $% &! »· $% & / () = Takabatana kugadzira mifananidzo. Emojis vauya kuzovandudza nyika, uye kunyangwe vamwe vangave vasingazvifarire, ivo vachasara ... Vachagara zvakanyanya zvekuti muviri unovhura emojis nyowani, iyo Unicode technical Committee iri kuvhura nyowani nguva zhinji.
Zviri pachena ndivo vagadziri vanofanirwa kuwedzera kune anoshanda masystem saka tese tinogona kuzvishandisa. Mazuva mashoma apfuura takazivisa nezvekuuya kwema emojis matsva kune iyo iOS system, uye yaive neiyo iOS 11.1 Beta 2 kuburitswa pavanenge vaonekwa. Iye zvino isu tichazongomirira chete yazvino Beta vhezheni dzeIOS 11.1 kuti iburitswe kuti tikwanise kuishandisa nekuti mashandisirwo acho ave kutotanga kuenderana neaya emoji nyowani. Yokutanga, Twitter, iyo ichangobva kugadzirwa inoenderana neyemojis nyowani. Mushure mekusvetuka tinokupa zvese zvese ...
Chekutanga pane zvese, ndikuudze izvozvo Twitter yatove kutsigira aya emojis matsva (vangangoita zana vachiwedzera pane zvataive nazvo), asi zviri pachena hapana zvatichaona kana tisina ivo muhurongwa hwedu hwekushanda, ndiko kuti, kana tisina iOS 11.1. Saka aya emojis achave inoonekwa muma tweets ese sekureba sekunge isu tine chero eBeta vhezheni dzeIOS 11.1 (kubva kune yechipiri Beta vhezheni).
Nhau huru dzinoenderera mberi nekujekesa kuti kunyangwe iine sarudzo dziri nani dzevatengi veTwitter pane yepamutemo vhezheni yenzvimbo, Twitter inoenderera mberi ichifambira mberi kuyedza kuve yakanakisa. Pakupera Icho chiri chepamutemo chikumbiro uye zviripachena tichaona chero nhau kutanga muhurumende app Twitter yeIOS.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Twitter inowedzera rutsigiro rweiyo nyowani iOS 11.1 emoji
Apple ichasiya mutero mainjiniya kunzvenga mutero
Yako yekuzvigadzirisa tambo ndeyechazvino patent yakanyoreswa neApple yeApple Watch